Uthisha osemkantshubomvu wase-UKZN, uMnu Andy Gray.
Uthisha osemnkantshubomvu eKolishi Lezifundo Zezempilo, uMnu Andy Gray unqobe ngokuhlanganyela umklomelo waminyaka yonke i-Helen Clark-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice (i-JoPPP) Award for Pharmaceutical Policy and Practice Research.
Abanye ayinqobe nabo ngoMnu Birna Trap wase-Denmark, noMnu Paul Newton wase-University of Oxford eNgilandi.
Bobathathu baklonyeliswe ngale ndondo ngenxa yomsebenzi wabo kanjalo nomphumela wayo ezigulini, kwabathatha izinqumo nohulumeni.
‘Ngiyabonga ngokubalwa nabavelele abawine imiklomelo yangaphambilini neyamanje, ngamunye babe namagalelo amqoka kulo mkhakha,’ kusho u-Gray.
Kusukela ngonyaka wezi-2018, i-Helen Clark-JoPP Award iklomelisa abacwaningi abavelele abanamagalelo amqoka endimeni yokukhiqizwa kwemithi nakulo mkhakha.
Lo mklomelo uqanjwe ngo-Helen Clark, owayenguNdunankulu wase-New Zealand noMphathi we-United Nations Development Programme ukuhlonipha igalelo lakhe endimeni yezempilo nentuthuko yomphakathi.
U-Clark ungomunye wosihlalo bethimba elizimele eliqokwe yi-World Health Organization (i-WHO) ukubuyekeza indlela eyenza ngayo izinto ukubhekana nobhubhane i-COVID-19 enoNkk Ellen Johnson Sirleaf, owayenguMongameli waseLiberia.
U-Clark uthe: ‘Sihalalisela bonke abaphumelele bathola imiklomelo. Kumnandi ukubona ukuthi umsebenzi wabo wenza umehluko ekuthuthikiseni izinqubomgomo, kanjalo nokuphucula impilo yeziguli namakhasimende.’
USihlalo wethimba lamajaji nonguMhleli oMkhulu wejeneli, uSolwazi Zaheer-Ud-Din Babar uthe: ‘Siyabahalalisela kakhulu ngempumelelo ebafanele. Kulo nyaka abaphumelele bathola umklomelo babeneqhaza elimqoka ekuthuthukiseni ucwaningo lwenqubo yezamakhambi.’
U-Gray usoPhikweni lweFamakholoji eMkhakheni weSayensi yezamaKhambi e-UKZN. Lolu phiko luyisikhungo esihlonzwe yi-WHO ngokubambisana kwizinqubomgomo zamakhambi nomsebenzi. UnguSosayensi oMkhulu wokuHlonishwa oyi-Consultant Pharmacist for the Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa (i-CAPRISA) nomcwaningi ovakashile weFamasi e-Rhodes University eMakhanda (eGrahamstown).
Njengelungu le-Expert Panel on Drug Policies and Management, uyi-Honorary Life Member ye-Pharmaceutical Society of South Africa (PSSA) ne-Fellow ye-International Pharmaceutical Federation (i-FIP).
Ubhale amaphepha ocwaningo amaningi kumajeneli aphesheya nawalapha, ungomunye wabahleli be-SA Pharamceutical Journal, ungumhleli wesigaba se-Journal of Pharmaceutical Policy and Practice nomunye wabasebhodini labahleli be-International Journal of Clinical Pharmacy, Health Systems and Reform ne-BMC Health Services Research. Uke waba yilungu lekomidi labahleli be-SA Health Review.